marqaan – Page 12 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Maxamed waxa uu ahaa Saqiirkii ugu yaraa ee ku dhaawacmay Xasuuqii shalay ee Xamar.
December 29, 2019 marqaan 0
Maxamed Cabdi Abuukar oo ah wiil yar oo 8 bilood jir ah ayaa noqday qofkii ugu da’da yaraa ee ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay Ex Koontarool Afgooye [Read More]
SAWIRO:- Dowladda Turkiga oo Meydadka Muwaadiniinteeda ka daad guraysay Muqdisho.
Meydka labo muwaadin Turkish ah oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii weynaa ee shalay ka dhaxay Ex Koontarool Afgooye ayaa maanta loo duuliyay dalkooda, si halkaas aas [Read More]
DFS oo Ciidamo Bolis ah kala dhex dhigtay Beelo ku dagaalamay Gudaha Muqdisho.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal maanta ka dhacay Xaafadda Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. Dagaalka ayaa saacado qaatay, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, waxa uuna u dhexeeyay Ciidamo [Read More]
Warbixin:- Maxay Alshabaab uga aamuseen Qaraxii ka dhacay Ex-Koontorool Afgooye? “Fikirkii kooxda maxaa iska badalay?”.
Qarax loo adeegsaday Gaari weyn oo xamuul ah, lagana soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa aroortii 28-ka Disembar 2019 sababay mid ka mida qasaarihii ugu badnaa ee dad shacab ah lagu [Read More]
Ciidamo kawada tirsan DFS oo wali ku dagaalamaya Qaybo kamid ah Muqdisho.
Waxaa Maanta xaafada Tarabuunka ee Magaalada Muqdisho maalinkii labaad ku dagaalamayo Ciidamo ka tirsan Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo hab beeleed u abaabulan. Dagaalka maanta ka dhacay Degmada Hodan ee Gobolka [Read More]
SAWIRO:- Madaxwayne Farmaajo oo Garoonka ku sagootiyay Dhaawacyada Xasuuqii EX-Koontorool Afgooye.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku sagootiyay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle dhaawacyada 16 kamid ah dadkii rayidka ahaa ee ku waxyeelloobay qaraxii shalay ka dhacay isgooyska Ex-Control ee [Read More]
DAAWO:- Fanaan Maxamed BK oo ku jeesjeesayay Shacabka Barooranaya ee Muqdisho “Qaraxa ka bixi maysaan intaad na haysataan”.
December 29, 2019 marqaan 1
Fanaanka Reer Somaliland Maxamed Siciid BK ayaa si jeesjee ah uga hadlay halaagii shalay ka dhacay Muqdisho ee lagu gumaaday shacab aan waxba galabsan. “Qaraxyada ka dhacaya Muqdisho waxay istaagayaan [Read More]
AKHRISO:- Xildhibaan Fiqi oo Tacsi udiray Laamaha Amniga “Tacsi aan horay loo arag oo loo diray Villa Somali”.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo tacsiyeynayey dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Shalay Subax ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dhankoodana uu u [Read More]
Faahfaahin:- Dad Caraysan oo si xun u dhaawacay Taliye kuxigeenka Boliska Puntland iyo qaar kamid ah Askartiisa “Dagaalka Sanaag”.
Taliye ku xigeenka Booliska Maamul Goboleedka Puntland Caydiid Axmed Nuur iyo askar la socotay ayaa ku dhaawacmay degaanka Midigale ee Gobolka Sanaag kaddib isku dhac dhexmaray dad careysan iyo ciidanka [Read More]
Degdeg:- Dagaal xoogan oo ka qarxay Gobolka Sanaag “Yaa dagaalamaya?”.
Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in iska hor imaad uu halkaasi ku dhex-marey dad Shacab ah oo careysan iyo ilaalada guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland [Read More]
Gudoomiye Cirro waxa uu si dareen leh uga hadlay Xasuuqii ka dhacay Xamar “Shacabka Hargaysa waxay la mururgoonayaan shacabka Muqdisho”.
Guddoomiyaha Xisbiga WADANI ee Soomaaliland ayaa kamid noqday siyaasiyiinta sida kulul uga hadlay qarixii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay Isgoyska E-Koontorool Afgooye ee Magaalada Muqdisho. Qoraal uu soo dhigay [Read More]
DAAWO:- Hooyo Somaliyeed oo Afar jeer Dhiigeeda ku bixisay caawinta dadka dhaawacyada ah “Waliba Dhiigeyga lama helo”
Qaar kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxey maanta gurmad dhinacyo kala duwan leh u sameeyeen dadkii Shacabka ahaa ee lagula eegtay qaraxa Ismiidaaminta ah isgoyska mashquulka badan [Read More]
DAAWO:- Puntland oo ku jeesjeestay Shacabka Gobollada SSC “Maamullada Khaatuma iyo Maakhir waa Maamulo Riyo uun ah”.
Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland ayaa Riyo aan jirin ku tilmaamay wax la yiraahdo Maamulada Maakhir iyo Khaatumo State, Isagoona fariin culus u diray shacabka Gobollada Sanaag iyo Haylaan oo ay beeshiisu [Read More]
AKHRISO:- Madasha Xisbiyada oo Seddex arin isugu daray Villa Somalia “Dhaliil, Canaan, Talooyin”.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa caawa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ugu horey tacsi ugu direen ehelada dadkii ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee saakay ka dhacay isgoyska Ex-koontorool Afgooye ee [Read More]
Sawiro:- R/W.Kheyre oo Tagay Halka uu kasocdo Gurmadka Degdega ee musiibadii shalay isagoona taleefanada shacabka ka jawaabayay.
Ra’iisul Wasaaraha XFS, mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqday xarunta gurmadka degdegga ah oo ay ka socoto isku dubba ridka howlaha loogu gurmanayo dadkii waxyeelladu kasoo gaartay weerarkii argagaxiso ee [Read More]
SAWIRO:- Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia oo xalay ku baraarugay Mashaqadii shalay ka dhacday Muqdisho.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa Xalay isbitaalada ku booqday dhaawacyada dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii Shalay ka dhacay Ex control Afgooye Gudoomiyaha oo ay la socdeen [Read More]
Degdeg SAWIRO:- Diyaarad siday Gargaar loogu talagalay Dhaawacyada oo hadda ka dagtay Muqdisho.
Diyaarad sida Dhaqaatiir iyo Daawo ay Dawladda Turkigu ugu gurmaneyso dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa goordhaw ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada [Read More]
Shariif “Madaxda ka shaqeysa Muqdisho qaarkood Al-Shabaab ayaa soo xula”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta booqday qaar ka mid ah Isbitaallada Muqdisho ayaa sheegay in aan la aqbali karin in si joogto ah loo xasuuqo Shacabka [Read More]
VIDEO:Update MD Si Qiiro Uga Hadlay Diyaarado Gurmad Soo Dira & Imaraad Siyaab Ah..
Dawladda Turkiga ayaa gargaar degdeg ah u soo dirtay dadkii Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobay Qaraxii Maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Diyaarad millatariga dalkaasi leeyahay ayaa Maanta kasoo duushay Magaalada Kayseri, [Read More]
DAAWO:- Ahlusunna oo ku baaqday in Taageerayaasha Alshabaab Toogasho lagu dilo + Fariin muhiim ah oo ku wajahan Tujaarta.
December 28, 2019 marqaan 0
Madaxa Xukuumadda Galmudug Shiikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa u tacsiyeeyay Eheladii dadkooda ku waayay Qarax Dhimasho iyo Dhaawac badan dhaliyay ee Saaka ka dhacay Ex control Afgooye. Sheikha ayaa [Read More]
Puntland oo Ku Dhawaaqday Midnimo Dowlada faderalka Loona Midoobo Dagaalka Shabaab
Garoowe, 28, December, 2019: Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxa ay ka tacsiyaynaysaa Qaraxii arxandarada ahaa ee saaka ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska Ex-kaantarool, taasi oo ahayd murugo iyo [Read More]
Dhacdooyinka Naxdinta leh ee Qaraxa Muqdisho Gabadho Walaalo Kuli Dhintay
Caaliya Xayle iyo Idil Xayle Waa Labba Gabdhood Oo Wallaalo Ah Waxey Wada Saarnaayeen Baska Jaamacada Banaadir ee Ardayda Wuxuuna Gaariga Ku Burburay Oo Uu Ku Basbeelay Qaraxii Saakay Kadhacay Isgooyska EX-Kontarool Ee Magaalada Muqdisho, [Read More]
DAAWO VIDEO:Meeqa Nin Ayaa Fuliyey Weerarka Ex Cantrol Afgooye Puntland Midnimo Ku Dhawaaqday
DAAWO VIDEO:Sir Qaabkii Baaburka Weyn Weerarka Ex C Afgooye Arimo Yaabka Fal Celinta
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi Qaran oo ka shaqeeya isku dubba ridka gurmadka loo sameeyo dadka waxyeellada kasoo gaartay Qaraxii maanta ka dhacay [Read More]
DAAWO:- Taliyaha Boliska Somalia oo fasiraad cajiib ah ka bixiyay sababta uu uqariyay Khasaaraha kadhashay Halaagii Maanta
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxii Al-shabaab ay maanta ku laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Taliyaha oo shir jaraaid qabtay ayaa [Read More]
« 1 … 11 12 13 … 92 »